ထိုဘလော့သည် ဗုဒ္ဒ၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တည်ရှိပါသောကြောင့်ရောက်လာသူအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ...
read more "စစ်သီချင်း"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:59 AM No comments:
read more "အလံတော်များ"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:46 AM No comments:
စာရေးသူ ဒီအကြောင်းအ၇ာလေးကိုေ၇းမယ်လို.စိတ်ကူးမိတဲ့ အချိန် အများကြီး ခြေတုံခြတုံ ဖြစ်မိပါတယ် ။ဘာလို.လဲ ဆိုတော့ စာရေးသူ အမြင်သက်သက် အယူအဆသက်သက် နဲ့ မိဘရဲ့ မေတ္တာကို ဆော်ကားသလို ဖြစ်နေမိမှာဆိုးပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းအရာလေးဟာ စာရေးသူရဲ့ အမြင်နဲ့အယူအဆပေါ် အခြေခံ ဆင်ခြင်စဉ်းစားပီး ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာရေးသူရဲ့ အတွေးအယူ အဆလေးကို share လုပ်တဲ့ သဘောအနေနဲ့ ရေးသားခြင်းသက်သက် မျှသာဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာနွယ်ဝင် အများစုဖြစ်တဲ့ မြန်မာမိဘတွေဟာသားသမီးတွေ နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ကံ ကြမ္မာ ဆိုတဲ့ အရာကို လွဲမှားစွာ ယူဆနေပုံကို တွေးမြင်မိလို. ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးသားလိုက် ရတာပါ။ မြန်မာ မိဘတော်တော် များဟာ သားသမီးတွေရဲ့ Life ကို ငယ်စဉ်ဘ၀ထဲက Creation လုပ်ဖို.ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ကဲ စာဖတ်မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေကို လည်း စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်က ကျန်လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ Life ကို Creation လုပ်ပေးလို. ရနိုင်ပါ့မလား။။သုံးလောကထွတ်ထား သဗ္ဘညု ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားတော်တောင်မှ လူသားတွေရဲ့ ကံကြမ္မာ ကို Creation လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ရဲ့လား စဉ်းစားစေချင်ပါတယ်။ ဘုရားက လူတွေ ကို Guide ဘဲလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ Creation လုပ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးနော် ။လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ ဘ၀အဆက်ဆက် မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ အထုံတွေ ဗီဇတွေ ၀ါသနာတွေ ပါရမီတွေ ဆိုတာ ကပ်ပါလာပီးသားပါ။ အဲ့တာကို မိဘလုပ်တဲ့သူက Guide လေးဘဲ လုပ်ပေးရမှာပါ။ သားသမီးတွေရဲ့ ၀ါသနာ တွေကို ငါမိဘဘဲ ဆိုတဲ့ ဘီတို အာဏာ နဲ့ ပယ်ဖျက်မယ်ဆိုရင် သင့်တော်ပါ့မလားဆိုတာ တွေးကြည်.သင့်တယ်နော်-တွေးဖို.လဲအရမ်းကောင်းတယ်။။စာရေးသူရဲ့ မိဘအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မိဘတိုင်းနီးပါးဟာ မိမိသားသမီးတွေအပေါ်မှာ မေတ္တာထားတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းဝံ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမေတ္တာပေါ်မှီတည်ပီး သားသမီးပေါ်ကောင်းစားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးလဲ ကပ်ပါလာတတ်ကြတာ မိဘတွေရဲ့ ဓမ္မတာပါဘဲ။ အဲ့လိုဆန္ဒလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန် မှာ သားသမီးတွေရဲ့ ၀ါသနာ ပါရမီကိုမကြည်.ဘဲ မိဘတွေရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိဖို.ကိုသာ ရှေ.တန်းတင်စဉ်းစားကြပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင်း ၁၀ တန်းကျောင်းသားတွေ ရှိတဲ့ မိဘတော်တော်များများဟာ သူတို.သားသမီးတွေကို ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တယ် ၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်စေချင်တယ်၊စစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေ၊ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိကြီးတွေ အစရှိသောဘ၀မျိုးတွေကို ပိုင်ဆိုင်စေချင်ကြသည်။ထိုဆန္ဒတိုင်းလဲ သားသမီးများကို ပုံသွင်းကြသည်။သားသမီးဘာဝါသနာပါလဲ ဘယ်လိုပါရမီရှိလဲ မလေ့လားလာတာများတယ် သားသမီးရဲ့ ၀ါသနာ ပါရမီ ကို ingnore လုပ်ထားတတ်ကြတာများပါတယ် ။ကဲ ရီးရဲမက်ဒရစ် က စီေ၇ာ်နယ်ဒို ၊ ဘာစီလိုနာက မက်ဆီတို.လို ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ မိဘတွေက Microsoft ကုမ္မဏီ ရဲ့ ပိုင်ရှင် Bill gates ကိုအားကျပီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေ ကို အတင်း Computer တက္ကသိုလ်တွေ တက်ခိုင်းခဲ့ ရင် အဲ့လူတွေ ယနေ.လို ကမ္ဘာကျော်လာနိုင်ပါ့မလား။ဲJustin bieber တွေရဲ့ မိဘတွေကကော သူ.သားကို ခုနက Messi တို.ကိုသဘောကျပီး ဘောလုံးအကယ်ဒမီ ကိုပို.ခဲ့ရင် ယခုလို အောင်မြင်လာနိုင်ပါ့မလား။ကဲအဝေးကြီးကြည်.မနေနဲ့ သုဒ္ဒေါသန မင်းကြီးဟာ သိတ္ထဒ္ဒမင်းသား ကို အတင်းအကျပ် စကြာဝဒေးမင်းလုပ်ခိုင်းခဲ့ရင် သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်စွားဘုရားရယ်လို. လူတကာက ရှိခိုး ခြင်းကိုခံနေရမှာလား ။ဟုတ်ပါပီ ထပ်ပြီးစဉ်းစားကြည်.ကြဦးစို.- Society တခုမှာ ဆရာဝန်ကြီးဘဲ အင်ဂျင်နီယာကြီးဘဲ စစ်တပ်အရာရှိကြီးဘဲ ဌာနဆိုင်ရာအရာရှိအကြီးကဲကြီးဘဲ သူဌေးကြီးဘဲ နဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို.ရပါ့မလား ။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ကား Driver တွေ ကုန်စည်သယ်ယူမှု ကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားတွေ အစားသောက်ဖွယ်ရာတွေကိုလွယ်လင့်တကူဝယ်စားနိုင်ဖို. ထမင်း ဟင်းရောင်းတဲ့သူတွေ အထိုထိုသောလူတန်းစားတွေ မရှိတော့ရင်ကော အဲ့ Society ကြီးက ရပ်တည်လို.ရပါ့မလား။ လူတိုင်းဟာ သူ.အထုံသူ.ပါ၇မီ နဲ့သူလာတာပါ သူ.ပါရမီနဲ့ကိုက်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရမှသာ ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းသားပီး အောင်မြင်နိုင်တာပါ။အသက်အရွယ်၇လာလို. အိမ်ထောင်ရပ်သားပြုတဲ့အခါကျရင်လဲ မြန်မာမိဘတော်တော်များများဟာ ၀င်ရောက်ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ပီး သားသမီးတွေရဲ့ Life ကို Creation လုပ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။အင်မတန် မှားယွင်းတဲ့အယူဆလို. စာရေးသူ သုံးသပ်မြင်မိပါတယ်။ အဲ့လိုပြောတော့ သားသမီးတွေကို ဘာမှမပြောဆို မဆုံးမ ရတော့ဘူးလားလို. ဒီတိုင်းလွှတ်ထားရမှာလားလို.မေးနိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ပါဘူး သားသမီးတွေ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်တဲ့အခါဘဲဖြစ်ဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကိုင်တခုကိုရွေးချယ်တာဘာဖြစ်ဖြစ် မိဘတွေက သားသမီးတွေကို မိမိတို.ရဲ့ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ ဘ၀အတွေ.အကြုံတွေ အသိတရားတွေကို Guide လုပ်ပေးလိုက်ကြစမ်းပါ သားသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကို အမိန်.နဲ့မဟုတ်ဘဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်ချင့်ချိန်နိုင်သော အသိတရားတွေ ၀င်နေအောင်ထဲ့ပေးလိုက်ကြစမ်းပါ။အဲ့လို အသိတရားတွေ ထဲ့သွင်းပေးလိုက်နိုင်တဲ့သားသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းဟာ အမှားအနည်းဆုံးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေပြည်.လျှံနေမယ်ဆိုတာ ဧကန်မလွဲဘာဘဲ။ဗုဒ္ဒစာပေမှာရှိတဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မှုခဲ့တဲ့ မကြံရာ(၄)မျိုးရှိတယ် ၁-ကံအရာကိုမကြံရာ ၂-ဈန်အရာကိုမကြံရာ ၃-ဘုရားအရာကိုမကြံရာ ၄-လောကအရာကိုမကြံရာ တဲ့။သို.သော် ဗုဒ္ဒဘာသာကိုအများဆုံးသက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေကြသော မြန်မာလူမျိုးမိဘတော်တော်များဟာ သားသမီးတွေ ကံအရာကိုများ ဘာကြောင့်ကြံစည်ချင်နေကြတာပါသလဲ။ စားရေးသူအပါအ၀င် စာဖတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကော တနေ.နေ.တချိန်ချိန် မိဘအရာရောက်လာခဲ့ရင် မိမိတို.ရဲ့ ဆန္ဒတွေကိုမြိုသိပ်ပီး သားသမီးတွေရဲ့ ၀ါသနာ ပါရမီအတိုင်း သူတို.ကံကြမ္မာ သူတို.ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ပေးနိုင်ပါ့မလား စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်း.ရင်း -ဟာ သွားပီ Virus ကိုက် သွားပီ............ :P
read more "မိဘမေတ္တာနဲ့ သားသမီးကံကြမ္မာ"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:29 AM No comments:
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်၏ ပညာရေးအမြင်
ကဲ တကမ္ဘာလုံးပြောနေကြပါပီ Knowledge Society တို. Education Age တို.ပေါ့ဗျာ။ လူသားတော်တော်များများသိလာကြပါပီ ပညာရေး ကဏ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတာ။ဟိုးယခင်က တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံ စစ်ချီးပီးစစ်တိုက်ကြတယ် လူအင်အားသာတဲ့သူ ကြံ့ခိုင်တဲ့သူ ဆင်
မြင်း ပေါများတဲ့ တိုင်းပြည်က အနိုင်ရကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ သီအိုရီအရ လက်နက်ချင်း ယှဉ်လာကြတယ် ကဲအခု နောက်ဆုံး Education War လို.ခေါ် ပညာရေးစစ်ပွဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာကြပီ။တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံ လက်နက်တွေကိုင် စစ်အင်အားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တဲ့ စနစ်တွေက တော်တော်များများပျောက်ကွယ်လာကြပီ။ နိုင်ငံတနိုင်ရဲ့ Human Resources ဘယ်လောက်များလဲ အဲ့အပေါ်အခြေခံပီး ကုန်ထုတ်မှု နည်းပညာ ဘယ်လောက်မြင့်မားလဲ အဲ့ဒါတွေနဲ့ လက်နက်မကိုင်ဘဲသြဇာ လွမ်းမိုးမှု ကို ရယူလာကြပါပီ။အဲ့လို Human Resources တွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်တာပညာရေးပါဘဲ တနည်းအားဖြင့်စာသင်ခန်းတွေကဘာဘဲ။ပညာ ဆိုတာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ ဆို သုံးလောကထွတ်ထား မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တောင်မှ နိဗာန်ခရီးကို ဒီလလိုအသိပညာ နဲ့ဘဲ အရောက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတာ ဘာသာရေးကိုတီးခေါက်မိသူတိုင်း သိကြပါလိမ့်မယ်။ ကဲ ဆက်ဦးစို. ကျွန်တော်တို.မြန်မာနိုင်ငံမှာ Natural Resources တွေ အများကြီးရှိပါတယ် အဲ့ဒါတွေဟာ အသုံးမချတတ်ရင် အလကားပါဘဲ။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတန်းက ရေခဲလိုဘာဘဲ (ဆရာ ဘဘဦးအောင်သင်း ရဲ့ ဥပမာလေးပါ) ။နောင်အနာဂတ်ရဲ့ နယ်ချဲ့မှု စစ်ပွဲတွေဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာဘဲ ရှိတယ်ဆိုတာ လူငယ်တွေကို သဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်။ကဲ ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးအကြောင်းလေး တစေ့တစောင်းလောက် အကဲခတ်ကြည်.ကြပါဦးစို.။ ငယ်စဉ်ကထဲ အခုချိန်ထိ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ချိတ်ထားတဲ့ဆောင်ပုဓ်လေးတခု လူတိုင်းသိမှာပါ "ပညာမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မည်" တဲ့ အရမ်းကိုတန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ စကားစုလေးပါ။ပညာမမြင့်တဲ့လူမျိုး ဘယ်မှာလာပီး တင့်တယ်နိုင်ပါ့မတုန်းဗျာ။ ပညာမတတ်တော့ လုပ်သင့်၏ မလုပ်သင့်၏ ပြောသင့်၏ မပြောသင့်၏ သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ မကြည်.ဘဲ စိတ်မှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပြောဆိုလုပ်ကိုင်တတ်ကြတာပေါ့။ အဆင်မသင့် အမြင်မသင့် လှတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ လူမျိုးဟာ ဘယ်မှာလာပီး လူအများအလယ်မှာတင့်တယ်နိုင်ပါ့မတုန်း ဗျာ။ "သားသမီး မကောင်း မိဘခေါင်း" " တပည်.မကောင်း ဆရာ့ခေါင်း" တဲ့ရှေးပညာရှိတွေရဲ့ ပြောစကား အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးမားလှပါတယ်။ တာဝန်မသိရင်တော့ တာဝန်မရှိဘူးပေါ့ဗျာ တာဝန်သိလာရင်တော့ အင်မတန်လေးနက်တဲ့ တာဝန်တွေပေါ့ဗျာ။ နောင်တချိန်မှာ မိဘ ဆရာ လူကြီး အုပ်ချုပ်သူ တွေဖြစ်လာမယ့် ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ (ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရင်ပေါ့ :P) လက်ရှိ မိဘ တွေ ဆရာတွေပေါ်မှာ 90 % မှုတည်နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝမေ့မထားကြပါနဲ့။အဲ့တာဝန်ကြီးကိုလဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လက်ခံလိုက်ကြစမ်းပါ။ အဲ့တာဝန်ကြီးဟာလူသားမျိုးနွယ်စုတခုလုံးအတွက် မဖြစ်မနေ ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်ကြီးဆိုတာ လေးလေးနက်နက် လက်ခံယုံကြည်ထားပါ။စာရေးသူ ဆရာ/မ တွေ ရဲ့ စာသင်ကြားမှုကို ကျွန်တော့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက် အမြင်လေးနဲ့ နဲနဲလောက် အကြံပြုပါရစေလားဗျာ.စာရေးသူတို. ငယ်ငယ်တုန်းက သင်ခဲ့ကြပါတယ် အခုလဲသင်နေဆဲပါဘဲ " ကကြီးကလေးငယ်ချစ်စဖွယ်တို. ခခွေး ခရေကုန်းမလေးပြုံး" တို. စာသင်ခန်းထဲမှာ ဆရာမက အဲ့ စာစုလေးကိုတိုင်ပေးတယ် ကျောင်းသားလေးတွေက လိုက်အော်ဆိုတယ် ရေးခိုင်းတယ် ကလေးတွေက အိမ်ရောက်ရင် အလွတ်ကျက်တယ် ရေးတယ် ဆရာမသွားပြတယ် စာလုံးပေါင်းမှန်ရင် ကောင်းတို. တော်တို.ပေးလိုက်တယ် ။ကဲ စဉ်းစားကြည်.စမ်းပါ အဲ့သင်ကြားမှုပီးဆုံးသွားတဲ့အချိန် ကလေးအတွက် ဘာကျန်ခဲ့ပါသလဲ စာရေးစာဖတ်တတ်သွားတာကလွဲပီး ဘာကျန်ခဲ့သေးလဲ စဉ်းစားပါ ဆရာ/မ တွေ များများစဉ်းစားကြပါ။အဲ့လိုတာမဟုတ်ဘဲ ဆရာမက ကလေးတွေက ဘာလို.ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ အပြစ်ကင်းစင်လို. လိမ္မာလို. မလိမ်မညာတတ်လို. အစရှိသဖြင့် ဂုဏ်ရည်ဒြပ် လေးတွေသာကလေးတွေနားထဲစိမ့်ဝင်နေအောင် သင်ကြားပေးခဲ့ရင် အဲ့ကလေးတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားလေးတွေဟာ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လောက် ကောင်းလာလိမ့်မလဲ စဉ်းစားစေခြင်ပါတယ်။အခုတော့ ကလေးတွေဟာ လှေနံဒါးထစ် မှတ်ယူခိုင်းခဲ့တဲ့ ပညာရေးစနစ်မှာကြီးမှာ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်မဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့တော့ အနာဂတ် အဲ့ကလေးတွေရဲ့ဘ၀ဟာ ဘွဲ့လက်မှတ်ကိုင် ပညာတတ်ကလေးတွေဘဲ ဖြစ်လာမှာ ဧကန်မုချပါဘဲ။ကဲ နောက်တခု ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ " သင်သေသွားသော် သင်ဖွားသောမြေ သင်တို.ပြည်သည် အခြေတိုးမြင့် ကျန်ကောင်းသင့်၏" ဆိုတဲ့ စာချိုးလေးဆို ဘယ်လောက် တန်ဖိုးမဖြတ် နိုင်တဲ့ စာချိုးလေးလဲ။အဲ့စာချိုးလေးရဲ့ ဘ၀ဟာ စာသင်ခန်းထဲလဲရောက်ရော ဆရာ တွေက ဖတ်ပြပီး စကားပြေလေးခေါ်ပေးပီး စာချိုးလေးရဲ့ ဘ၀ဟာ ပြီးဆုံးခဲ့ရတာများပါတယ်။အဲ့လိုတာမဟုတ်ဘဲ ကျောင်းသား/သူ လေးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ တိုင်းပြည်ပေါ်အလုပ်အကျွေးပြုချင်တဲ့စိတ် အနစ်နာခံရဲတဲ့စိတ် အတ္တပရ မျှတစေနိုင်တဲ့ အသိတရားလေးတွေသာ ထဲ့ပေးလိုက်စမ်းပါ နောင် တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ် အဲ့ကလေးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန် ဘယ်လောက် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ တင့်တယ်လိုက်မလဲ ။ကဲ အဲ့စကားပြေ ကို အစအဆုံးအလွတ်မရေးနိုင်တော့ကော ဘာအရေးလဲ စာမေးပွဲခန်းက ထွက် အခုမေ့သွားပီဘဲ စဉ်းစားစေခြင်ပါတယ် ။နောက်တခု ရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ စစ်ထွက်ကဗျာလေးဆိုကြည်.စမ်းပါဦး "ပျိုတို.မောင်မှာ စစ်သံကြားလျှင် အိုးစားဖက်ကို လိုက်လို.ရှာသည်" ဆိုတဲ့ စာချိုးလေး ဘယ်လောက် အဓိပါယ်ရှိသလဲ ဗျာ ယောကျာင်္းလေးတယောက်ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် အသက်ပဓာနမထားအမှုတော်ထမ်းချင်လိုတဲ့ စိတ် အနစ်နာခံယူလိုတဲ့စိတ် တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် အနစ်နာခံ ထမ်းရွက်မယ် နှလုံးသားထက် တာဝန်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်(ဟိဟိ ကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ ဖိကြွားရတာပေါ့ :P) အဲ့လိုလေးတွေတာထဲ့ခဲ့ပေးရင်လားဗျာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးအင်အားဟာလဲ ပြောမကုန်အောင် တင့်တယ်နေပါလိမ့်မယ်။ကဲ ခေတ် ပညာရပ်တွေရဲ့ သင်ကြားမှု အပိုင်းတွေကိုကြည်.ကြဦးစို. ရှုပဗေဒ ဓာတုဗေဒ ရဲ့ law တွေ Definition တွေ သင်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ် ။ဥပမာ နယူတန်ရဲ့ စက္ကန်းလောဆိုပါတော့ F=Ma ပေါ့ ဆရာမက အခန်းထဲ ၀င်လာမယ် ကျောင်းသားတွေကို စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ Definition ဖွင့်ဆိုချက်ထဲက စာလုံးတွေကိုဘာသာပြန်ပေးမယ် အဲ့အတိုင်း ရှင်းပြမယ် F ဆိုတာက ဘာ M ဆိုတာက ဘာ A ဆိုတာက ဘာအစရှိသဖြင့် ရှင်းပြသွားလိမ့်မယ် ကလေးကလဲ F ကိုလိုချင်ရင် Mတန်ဖိုးနဲ့ A တန်ဖိုးကိုမြောက်ပီးရလာတဲ့အဖြေက F တန်ဖိုး ဒီထက်ကလေးမှာထပ်ပီး တိုးချဲ့စဉ်းစားနိုင်ဖို.ဆရာ ဆရာမ တွေ လမ်းကြောင်းမဖွင့်ပေးခဲ့နိုင်ဘူး။ပီးရင်ကလေးက အဲ့စာကို s တလုံးမကျန်အောင် အိသည်မရွေး ကျက်မယ်စာရွက်မှာခေါက်တုန်.ခေါက်ပြန်ရေးချမယ် စားမေးပွဲသွားဖြေမယ် ။ကဲ စဉ်းစားကြည်.ပါဦး အဲ့ကလေးမှာ အဲ့ law နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ဖော်မြူလာသိမယ် ပေးထားတဲ့ သီအိုရီကိုအလွတ်ပြောနိုင်ဆိုပြနိုင်ရုံကလွဲပီး ဘာများထူးခြားပီး အတွေးအမြင်ချဲ့ထွင်နိုင်မလဲ လက်တွေ. F ကို ရှာပြပါဆိုရင် တောင် စာရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ ယောင်လည်လည်ဖြစ်နေဦးမှာဘဲ ။ကဲ ဒီလိုစာသင်ခန်းတွေထဲမှာ ဒီလိုသင်ကြားမှုမျိုးတွေနဲ့ဘဲ ဆက်လက်ခရီးဆက်ချီတက်နေကြဦးမယ်ဆိုပါလျှင် အဲ့ကလေးတွေ က မိဘဖြစ်လာမယ် ဆရာ ဆရာမတွေ ဖြစ်လာမယ် အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပါလျှင် တိုင်းပြည်အနာဂတ်ဟာ အခုလက်ရှိ ဆရာ ဆရာမများရဲ့ မိဘများရဲ့ အပေါ်မှုတည်နေပါတယ်ဆိုတာအကြံပြုလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ ဆရာမများအပေါ် အပြစ်မြင်တဲ့ စေတနာ မျိုးနဲ့ ထောက်ပြခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘာ။ဆရာ ဆရာမ များမှာလဲ အထက်ကပေးအပ်တဲ့မှုဝါဒတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေ၇တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အခက်အခဲများစွာရှိပါလိမ့်မည်ဟု စာရေးသူထင်ပါတယ်။ သို.ပေတကား ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲဆိုသလို ဆရာ ဆရာမ များ သတိမချပ်မိတာလေးတွေ သတိချပ်မိစေ ချင်သော စေတနာ စေတသိက် လေးနဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါကြေင်း။(စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု မပါသည်.စာပေသင်ကြားခြင်းသည် မိုက်မဲမှုတခုဖြစ်ပီး သင်ကြားမှု မပါတဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုသည် ရှုးသွပ်မှု တခုသာဖြစ်သည်။)အစဉ်လေးစားလျှက်.....ကြိုးစားပါဦးမည်(ကလောင်ရှင်-နေ၀န်းရောင်(ခေတ္တမော်စကို))
read more "ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်၏ ပညာရေးအမြင်"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:28 AM No comments:
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ယုံကြည်မူ တခုခု ဆိုတာတော့ ရှိကြစမြဲဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ယုံကြည်မူမရှိလျှင် လည်း လူသားတို.၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မူသည် အင်မတန် အဓိပ္ဘါယ် မဲ့လိမ့်မည် အထီးကျန်လိမ့်မည် လမိုက်ည မှာ လမ်းပျောက်နေသော လူတယောက်နဲ့တူနေပေလိမ့်မည်။စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်တွင်လည်း ယုံကြည်မူရှိပါသည်။သို.သော် ယုံကြည်မူတိုင်းဟာ အမှန်တရားပါလို. လက်ကိုင်ဆွဲထားရင် သင့်တော်ပါ့မလားဆိုတာ အင်မတန် စဉ်းစားတွေးခေါ်သင့်တဲ့အချက်တခု ဖြစ်ပါသည်။ စဉ်းလဲစဉ်းစားသင့်ပေသည်။ အသိဥာဏ် ပညာမပါသော စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်မပါသော ယုံကြည်မူမျိုးသည် လူသားတို.အကျိုးစီးပွား သံသရာအကျိုးစီးပွားအတွက်အင်မတန် မှ ကြောက်ဖို.ကောင်းလှပါသည်။။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူများသည် အားကိုးရှာကြသည် အားကိုးထိုက်သူဟု ယူဆလျှင်ထိုသူအပေါ်အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်တတ်ကြသည် ထိုအကြောင်းအရာလေးသည် လူသားတိုင်း၏ ဓမ္မတာ ပင်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် အားနွဲ့သော မိန်းကလေးတော်တော်များများသည် အားကိုးအလွန်ရှာသော သတ္တ၀ါ မျိုးဖြစ်သည်။ ထိုအထဲမှ မြန်မာမိန်းကလေးအများစု သည် အဆိုးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟု စာရေးသူ ထင်မြင်မိပါသည်။ မြန်မာမိန်းကလေး အများစု သည် ဗေဒင် ယုံသည် ယြတာ ယုံသည် ဘိုးတော်ယုံသည် နတ်ယုံသည် အကြားအမြင်ယုံသည် အမျိုးမျိုးယုံကြည်ကြသည်။ ထိုယုံကြည်မူတွေ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လဲ အလိမ်ခံခဲ့ရဖူးသည် ။စာရေးသူ၏ အမသည် မိန်းကလေး သဘာဝ အင်မတန် ဗေဒင် ယြတာ အကြားအမြင် တို.ကို ၀ါသနာ ထုံသူဖြစ်သည် စာရေးသူ ၁၀ တန်းဖြေသည်. နှစ်တွင် အမလုပ်သူလဲ ၁၀ တန်း ပြန်ဖြေသည် ။အမသည် စာမကျက် ဘဲ ဗေဒင် ယြတာ ချေခြင်းဖြင့် ၁၀ တန်းကို မကြာခဏ၀င်ဖြေလေ့ရှိသည်။(မှတ်ချက် -အခုချိန်ထိမအောင် ကလေးရသွားသဖြင့် လက်လျှော့ လိုက်သည်)။ ထိုနှစ်တွင် ၁၀ တန်းဖြေပီး အမ ခေါ်သွားသဖြင့် အကြားအမြင်ထံ ပါသွားဖူးသည်။ အကြားအမြင်ဟောတတ်သည် ဆိုသော မိန်းမကြီးသည် သူ၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း နတ်စင် တွေ ဘုရားစင်တွေရှေ့ ခေါင်းကြီးတဆတ်ဆတ်နဲ့ပေါ့ ပီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုဟောတယ်
ကောင်လေးက ဂုဏ်ထူးဘယ်နှစ်လုံး ပါမှာတဲ့ ။တကယ်ပါ အဲ့တုန်းက အကြားအမြင်ဆရာမပြောတော့ ကိုယ့်ကိုကို ဖင်နဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့တောင်နဲနဲ လွတ်သွားချင်သလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် ယုံကြည်မူနော် ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးလဲ မိဘတွေ ဆို အကြားအမြင်ဆရာမက ဂုဏ်ထူးပါမယ်ပြောတာကို တရပ်ကွက်လုံး မောင်းထုကြေညာပြီး ဂုဏ်ယူနေတာ အဲ့တုန်းကတော့ အောင်စာရင်းမထွက်မချင်း လူအထင်ကြီးခံရနဲလားဆိုပီး မှိန်းနေလိုက်ပါသေးတယ် နောင်အခါလာ နောင်အခါဈေးပေါ့။ကဲ စာဖတ် ပရိတ်သတ်ကြီး စဉ်းစားကြည်ပါ ထိုယုံကြည်မူတွေဟာ အမှန်တရားလားဆိုတာ။ တကယ် စာပေကိုနဲနဲ တီးမိခေါက်မိ ဖတ်မိတဲ့အချိန် ကျမှ အကြားအမြင်ဆိုတာ သမ္မထ ကျင့်စဉ်တခု မြို.ပေါ်မှာဆို ဘယ်သူမှ သမ္မထ မတည်နိုင်ဘူး သမ္မထ တည်မယ့်သူဟာ လူသူကင်းမဲ့တဲ့ တော်မှာသာ သမ္မထတည်နိုင်တယ်။ ကဲ အတွေးအခေါ် ဗဟုသုတ ကင်းမဲ့ခဲ့တဲ့ ယုံကြည်မူဟာ လူတွေကို ဘယ်လောက် ဒုက္ခပေးသလဲ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးဘဲ စဉ်းစားကြည်.တော့ ။လက်ရှိ ရန်ကုန်တို. မန္တလေးတို.မှာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေ ထောင်ပြီး တရားဝင်လိမ်စားနေတဲ့ သူတွေရော ဥာဏ်ပညာကင်းမဲ့နေတဲ့ ဆင်ခြင်တုန်တရားကင်းမဲ့စွာ ယုံကြည်နေတဲ့လူတွေ ဒု နဲ့ဒေးပါဘဲ။ ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည်.ပါ အကြောင်းအရာလေးတခုကိုဘဲ ချပြမယ် အခု ဗေဒင်တွက်နေ တဲ့သူတွေ ယြတာ ချေပေးနေတဲ့သူတွေ အကြားအမြင်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ သူတို.တတွေ အခကြေးငွေယူပီး စီးပွားရေး တရပ်သဖွယ် လုပ်စားနေတဲ့သူတွေကြီးဘဲ။ သူတို.တာတကယ်မှန်ရိုး သိရိုး ဆိုရင်ဗျာ လာမယ့် မန်ယူ- ဘာစီလိုနာ ပွဲကို အိမ်တိုင်ချွတ်ပီးလောင်းမှာပေါ့ ။ ဘယ်ဗေဒင်ဆရာလောင်းလဲ စဉ်းစားကြည်.ပါ။ဘုရားကဟောထားပြီးသား ပါ ကံအရာကိုမကြံစည်ရာ၏ လို. ပီးတော့ မိမိလုပ်တဲ့ ကံ (အလုပ် အကြောင်း)ကောင်းရင် အကျိုးကောင်းမှာ ဘယ်သူမှ မကောင်းနဲ့လို.တားလို.မရသလို ကောင်းပါလို.လဲတွန်းပို.လို.မရဘူး။ ကဲ အထက်ပါ ယုံကြည်မူမျိုးဟာ အမှန်တရား ပါလို. ဘယ်သူအာမခံနိုင်မလဲ။။ ကဲ နောက်ထပ် ကမ္ဘာမှာ ရှိတဲ့ ဘာသာတရားကြီးတွေကိုဘဲ ကြည်. အစလမ္မာစ် နဲ့ ခရစ်ယာန် ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်နေသူတွေ
ဟာ ယုံကြည်မူလွန်ကွဲပြီး ခရုဆိတ် ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးစစ်ပွဲကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ် လူသားတွေ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ သိန်းနဲ့ ချီပီး သေကြေပျက်စီးခဲ့ရတယ် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတွေ များစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ် ကဲ ဒါကကော မှန်ကန်တဲ့ ယုံကြည်မူလို.ဆိုနိုင်မလား ။ကဲ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးကာစ သိပ်မကြာခင်လေး ကျူးဘားအရေးအခင်း အမေရိကနဲ့ ဆိုဗိယက်တို. ရဲ့ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ မှန်တယ်ထင်တဲ့ အကြောင်းတွေကြောင့် သီသီလေး တတိယ ကမ္ဘာစစ်ကနေ လွတ်ခဲ့ရတယ် (ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမူးချုပ် ဦးသန်.၏ ပထမအဆက် လက်ထက်) ကဲဒီလိုယုံကြည်မူတွေကကော မှန်ကန်တဲ့ ယုံကြည်မူအမှန်တရားတွေဘဲလား။ ကဲမကြာသေးခင်ကမှ ပူပူနွေးနွေးလေး အနိစ္စရောက်သွားတဲ့ အိုစမာဘင်လာဒင် ဆိုသူရဲ့ ၂၀၀၁ခုနှစ် က လုပ်ရပ်ကိုကြည်. သူ.ဘက်ကတော့ ယုံကြည်မူ အမှန်တရားဘဲ လူပေါင်းဘယ်လောက် သေကြေပျက်စီးခဲ့ရသလဲ သူတို.ကြောင့် မိဘမဲ့ကလေးတွေ ဘယ်လောက် များပြားခဲ့ကြသလဲ စဉ်းစားကြည်.ကြပါ။အဲ့လိုယုံကြည်မူမျိုးကကော အမှန်တရားဘဲလား။ကဲ ကမ္ဘာနဲ့ ယှဉ်ပြီး မကြည်.တော့ဘူး ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲမှာဘဲ ကြည်. ကြစို. မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးဆိုကထဲက ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ် လက်နက်ကိုင်ပီး တောထဲ ထွက်သွားလိုက်ကြတာ အဖွဲ့အရေအတွက်ပေါင်းမနဲ ပါဘူး ။ကဲအဲ့လိုကိုယ့် ယုံကြည်ချက်ကိုမှ မှန်တယ်ထင်ပီးအဲ့လို ထင်ရာ စိုင်းခဲ့တော့ အခု တိုင်းပြည်နောက်ကောက်ကျကျန်ခဲ့တယ် (နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောခြင်းမဟုတ်ပါ ပုဂ္ဂလ ဓိဓာန်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ ဓမ္မဓိဌါန် ပြောခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။)ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို.မရတဲ့ အချက်တခုပါ။ ကဲ ပီးတော့ ပြည်ပ ရောက် နိုင်ငံရေးသမားတချို.ရဲ. လှုံ.ဆော်မူကြောင့် စာသင်သား ရဟန်းသံဃာတွေ လမ်းပေါ်မှာ မေတ္တာပို.(နိုင်ငံရေးသမားများ၏အပြော) ဆန္ဒပြ အော်ဟစ်ကြတဲ့ အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ် ။ကဲ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားက ခန္တီ ပါရမီ မေတ္တာတရားကိုသာဆွဲကိုင်ပီး အောင်ပွဲဆင်တာပါ နိုင်ငံရေးလုပ်တာ အားပေးတယ်လို. ဘယ်ကျမ်းဂန်မှာမှ ရေးသားထာမှာလဲ မဟုတ်ဘာဘူး ဘယ်ဆရာတော်ကြီးမှလဲ အားမပေးဘူး ဟောလဲမဟောပြဘူး။ဆိုလိုတာက ယုံကြည်မူကို မှန်တယ်ထင်လာရင်လုပ်သင့်၏မလုပ်သင့်၏ မစဉ်းစားဘူး ကိုယ့်ယုံကြည်မူ အတွက် သာသနာ ပျက်စီးမှာ ကိုလဲ အရေးမထားဘူး ညိုးနွမ်းမှာကိုလဲ မစိုးရိမ်ဘူး အပါယ်ငရဲ ကျမှာလဲ မကြောက်တော့ဘူး ။ကဲ အဲ့လိုယုံကြည်မူမျိုးကိုကော အမှန်တရားလို. ဆိုနိုင်မလား(ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ် ဝေဖန်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး ယုံကြည်မူဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်ကို ဓမ္မဌိဓါန်ကျကျ ရူမြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။)ကဲ ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ သမာတွေဘဲကြည်. သူတို.ရဲ့ယုံကြည်မူဟာ ဘယ်လောက်ပြင်းထန်လဲ အဖေမရှိဘူး အမေမရှိဘူး လုံးဝရုပ်ဝါဒီသမား များသက်သက် ကဲနောက်ဆုံးသူတို.ရဲ့ ယုံကြည်မူအတွက် အဖေသက်ဖို.လဲ ၀န်မလေးဘူး အမေသက်ဖို.လဲ ၀န်မလေးဘူး အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ယုံကြည်မူမျိုးတွေပါ။ကဲ အဲ့လိုယုံကြည်မူမျိုးကိုကော အမှန်တရားပါလို. ဘယ်သူအာမခံလဲ ။ ကဲစာရေးသူရဲ့ နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့ စာရေးသူရဲ့ အမြင်လေးကတော့ ကိုယ့် ယုံကြည်မူ ကိုယ့်အတ္တ အမှန်တရားဆိုတဲ့ အရေခွံ ခပ်ပါးပါးလေးနဲ့ ဖုံးအုပ်နေမယ့်အစား အများအကျိုးရှိမယ့် လူတွေရဲ့ ယခုဘ၀ကော ဘ၀သံသရာဆက်ဆက် အကျိုးရှိမယ့် စစ်မှန်တဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်တရားပါတဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့် ဘေးဥပဒ်မရှိတဲ့ ယုံကြည်မူမျိုးကိုသာ ရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြု လိုက်ရပါကြောင်း -အစဉ်လေးစားလျှက်
-----------(စာကြွင်း-ထိုအထက်ပါ အကြောင်းအရာလေးကို ငါသိငါတတ်ဂုဏ်မာန်တက်ပြီးရေးသားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ မိမိ၏တွေးခေါ်မူလေးကို အကျိုးရှိမည်ထင်သဖြင့် မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်သည် ။အမြင်မတူကလဲ ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်သည်။
မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ မည်သည်.ဘာသာတရားကိုမျှ မည်သည်.အဖွဲ့အစည်းကိုမျှ နစ်နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒတစုံတရာဖြင့် ရေးသားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါ ယုံကြည်မူကို ဓမ္မဌိဓါန် ကျကျရူမြင်သုံးသပ်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်ပါသည်။ သစ်ရွေးသမား (ရေပေါ်ထိုးတဲ့သူ) ဟာ သစ်ကို ဖြောင့်တန်းအောင် သစ်ရွေးတဲ့နေရာမှာ အစွန်းအစတွေနစ်နာစေလိုတဲ့သဘောမပါဘဲ သစ်ဖြောင့်တန်းမူအတွက် မညှာတာမငဲ့ကွက်ဘဲ သစ်ရွေးရသလို စာရေးသူလဲ လူသားအများစု အမှန်ကိုသိနိုင်စေခြင်း အလို.ဌာ မငဲ့မကွက်ရေးရခြင်းမျိုးသားဖြစ်ပါတယ် ထိုးမိလိုက်တဲ့ အစွန်းအစများအတွက် အစဉ်အားနာထောက်ရှူလျှက်)
read more "ယုံကြည်မူ နှင့်အမှန်တရား"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:27 AM No comments:
ပညာရေး နှင့် ငွေ
ထိုအကြောင်းအရာလေးသည် မြန်မာလူမျိုးအများစု၏ သားသမီးအပေါ် ထားရှိသောစေတနာ အမှား လေးတခုကို သတိပြုမိစေရန် နှင့် သားသမီးများအနေဖြင့် ဆင်ခြင်ပြင်စဉ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမြင်မတူ လျှင်လည်း အပြစ်တင်ဝေဖန်မူများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။။ ထိုအကြောင်းအရာလေးကို ငါသိ ငါတတ် ဂုဏ်မာန်တတ်ပြီး ရေးသားခြင်းမျိုးလဲမဟုတ်ဘာ။ မိမိ တွေးမိသော အကြောင်းအရာလေးတခုကို မျှဝေပေးခြင်းမျှသာဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလူမျိုးများသည် သားသမီးအပေါ် အလွန် ချစ်ခင် တွယ်တာ ပြီး သံယောဇဉ်အလွန်ကြီးသော လူမျိုးဖြစ်ပါသည်။မိမိ၏ သားသမီးများအပေါ် အလွန်အမင်း ချမ်းသာစေချင် ကောင်းစားစေချင်သည် ထို စေတနာဇောကြောင့် စေတနာအမှားနဲ့ ဆုံးမတတ်သည်.အကြောင်းအရာလေးတခုကို သတိချပ်မိပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာလေးကို ကျွန်တော်၏မိဘများပင်လျှင်မကြာခဏ ပြောဆို ဆုံးမတတ်သည်။
မိမိ၏သားသမီးများ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀ ပညာသင်ကြားနေစဉ်အရွယ်တွင်ပင် သားသမီးများအပေါ်ထားသော ရည်မှန်းချက်များသည်အလွန်းမင်း ကြီးမားလှပါသည်။သို.သော်ထိုရည်မှန်းချက် တွင်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်(စေတနာ)မှာ ချွတ်ချော်တိမ်းစောင်းနေပါသည်။ မိဘများသည် မိမိ၏ သားသမီးများကို သူများနှင့်မတူ တော်စေချင်သည် တတ်စေချင်သည် သားသမီးများ ကြီးလာလျှင် ဆရာဝန်ကြီးများ ဖြစ်စေချင်သည် အင်ဂျင်နီယာကြီးများ စစ်ဗိုလ်ကြီးများ အထိုထိုသော ပညာတတ်များ အဆင့်မြင့် ဘ၀များကို ပိုင်ဆိုင်စေချင်ကြသည်။ထိုသို. မိဘများသားသမီးအပေါ်ထားရှိသော ရည်မှန်းချက်များသည် အလွန်အမင်းကောင်းပါသည် ။သို.သော် မိဘများသည် ထိုသို.ဆရာဝန်ကြီး စစ်ဗိုလ်ကြီး အင်ဂျင်နီယာ အထိုထိုသော ဘ၀များကို ပိုင်ဆိုင် လျှင် ဘယ်လိုသက်တောင့်သက်သာနဲ့ ပိုက်ဆံကို ရရှိနိုင်မည် ဘယ်လိုချမ်းသာအောင် လုပ်နိုင်သည် နေရာကောင်းရလျှင် ဘယ်လိုအကျိုးတွေခံစားခွင့်ရမည် ဟူသော မှားယွင်းသောအယူအဆများကိုပါ သားသမီးများ၏ စိတ်နှလုံးသားထဲ စွဲနစ်နေအောင် ရိုက်သွင်းပေးလိုက်တတ်ကြသည်။ ထိုကလေးများ အရွယ်ရောက်ထိုသို.သော ပညာတတ်ကြီးများ(အများကသတ်မှတ်သော) ဖြစ်လာသည်.အခါ ပိုက်ဆံ ရှာဖို.အတွက်ကိုသာ ဦးစားပေးစဉ်းစားလာတော့သည် ၀န်ထမ်းများဖြစ်လာလျှင် ကိုယ်ကျိုးသာ ကြည်.တော့သည် နေရာကောင်းရလျှင် ဘယ်လို အဂတိလိုက်စားရမည် ဆိုသာပင် အစဉ်စောင့်ကြည်.နေကြတော့မည် လုပ်သင့်၏ မလုပ်သင့်၏ မှန်၏ မှား၏ ဟူသော လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားတတ်သော စိတ်ဓာတ်များ မေတ္တာတရားများ ကိုယ်ကျင့်သီလများ ဆိတ်သုန်းကုန်တော့မည် ။ သူတို.၏ စိတ်ထဲတွင် ပညာသင်ကြားလာတာ ငွေရှာဖို.အတွက်ဘဲ ဘ၀ဖူလုံမူရ၇ှိရေးအတွက်ဘဲ ဟု ကျဉ်းမြောင်းသောအတွေးအခေါ်များ နဲ့ ပညာတတ်လူမိုက်များဖြစ်လာပါတော့သည် ။ထိုကဲ့သို.အတွေးအခေါ်အယူအဆရှိသော ပညာတတ်များ များပြားလာလျှင် လူ.ဘောင်လောကြီးအတွက် အလွန်အန္တာရယ်ကြီးထွားလာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် ၏ မိတ်ဆွေးရင်းချာတယောက်နဲ့ စကားပြောဖူးသည် သူသည်ပညာအလွန်တတ်သော သူတယောက်ဖြစ်သည် သူပြောခဲ့ဖူးသော စကားလေးတခွန်းကြောင့်လဲ ဒီပို.စ်လေးကို ရေးဖို.ဆုံးဖြတ်ခဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ် သူက " ငါ ဘွဲ့တွေထပ်ယူဦးမယ် ပညာတွေတတ်မှ ဘ၀ ကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ငွေရှာနိုင်မှာ ဇိမ်ရှိရှိ မပင်မပန်းဘဲ နေနိုင်မှာ" ။အမှန်တကယ် ပညာဆိုတာ =၀ိဇ္စာ ဆိုတဲ့ သိမူဘာဘဲ ပညာဆိုတာ ဘယ်ဟာကတော့ လုပ်ရင်မှားတယ် ဘယ်ဟာကတော့ လုပ်ရင်မှန်တယ် ဘယ်လိုဟာမျိုးကအများအတွက် အကျိုးရှိမယ့် လုပ်ရပ် ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးက လောကအကျိုး အများအကျိုး ဆုတ်ယုတ်စေမယ့် လုပ်ရပ် မျိုး ထိုသို.ဆင်ခြင်စဉ်းစားတတ်အောင် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်တယ် ။မိဘများအနေဖြင့်လဲ သားသမီးများကို ငယ်စဉ်တောင်ကြေး ပညာသင်ကြားပေးစဉ်အရွယ်ထဲကပင် သူတို.အတွေးအခေါ် အယူအဆများ မှန်ကန်အောင် ပညာသင်တာ အမှားအမှန်ခွဲခြားတတ်ဖို. အနစ်နာခံပီး မိမိတတ်သည်.ပညာဖြင့် အများအကျိုး လုပ်ဆောင်ဖို. ကိုယ်ကျင့်သီလကောင်းဖို. လောကအကျိုး ရွက်သယ်ပိုးဖို. ထိုသို.သော အတွေးအခေါ် အယူအဆကောင်းလေးများကို သားသမီးများ၏ စိတ်ထဲ နှလုံးသားထဲ ဆူးဝင်နေအောင် ရိုက်သွင်းထားပေးသင့်ပါသည်။ထိုမှသာ ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်ပတ်ဝန်ကျင်ဟာ အများတကာ နိုင်ငံတကာက စံထားလောက်တဲ့ အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ လူမျိုးများ မုချ ဧကန် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မျှော်လင့်လျှက် .......ကလောင်ရှင်
read more "ပညာရေး နှင့် ငွေ"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:26 AM No comments:
ရွှေမြန်မာ များ နှင့်ေ၇ာင့်၇ဲတင်းတိမ်ခြင်း
ေ၇ွှမြန်မာများ ဆိုသဖြင့် မြန်မာလူမျိုး အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါ အများအားဖြင့် တိုက်ဆိုင်နေသောကြောင့် ထိုနာမ်စားလေးကိုသုံးစွဲလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အခုပြောမယ့် အကြောင်းအရာလေးကို ငါသိငါတတ်ဂုဏ်မာန် တတ်ပြီးပြောခြင်းမျိုးလဲ မဟုတ်ပါ။ အများစု လွှဲမှားနေသော အယူအဆ တခုကို ပြင်ဆင်စေလိုသော စိတ်စေတနာ သန်.သန်.ဖြင့်သာ ရေးသား တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမြင်မတူလျှင်လဲ ဝေဖန် ထောက်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို. မြန်မာအများစုဟာ ပျင်းရိခြင်းကို ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းဟု အလွဲသုံးစားလုပ်ပီး ဂုဏ်မာန်တတ်နေကြပါသည်။ အလုပ်တခုကို မလုပ်ခင်ကဘဲ ရောင့်ရဲနိုင်ပါတယ်လေ ဆိုပီး ၀ီရိယမစိုက်ထုတ်ဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန်အတွေးမျိုးနဲ့ဘဲ လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို.မရတဲ့ အချက်တခုပါ။ ထိုသူတို.၏ လက်သုံးစကားကား ဗုဒ္ဒဘာသာ လူမျိုးတွေဘဲ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်နိုင်ရမှာပေါ့ ဟု ဘုရား၏ စကားကိုအလွဲသုံးစား လုပ်တတ်ကြသေးသည်။ သုံးလောကထွတ်ထား ကျွန်တော်တို.ရဲ့ ဗုဒ္ဒ မြတ်စွာဘုရားဟာ ထိုကဲ့သို. လောကအကျိုးဆုတ်ယုတ်စေမည်.စကားမျိုးကို ပြောလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ ရောင့်ရဲခြင်းကိုတော့ ပြောခဲ့ပါသည် ထိုကဲ့သို. အဓိပါယ် ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို.ဘာသာမှာ လောကီကောင်းစားရေးကိုပြုခြင်လျှင်လည်း ပြုခွင့်ရအောင် ဘုရားက သွန်သင်လမ်းညွှန်မူတွေထားခဲ့ပါတယ် ။လောကုတ္တရာကောင်းစားဖို.အတွက်လဲ အဆုံးအမများစွာရှိပါတယ်။ လောကီကောင်းစားရေးအတွက် ရှာဖွေစားသောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို.လို လူတွေအတွက် ၀ရီယ ကအရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တခုပါ သမာလောဘ လို.ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး။ ပျင်းရိတာကို ရောင့်ရဲတာလို.ထင်နေတော့ မှားယွင်းတဲ့အယူအဆ တခုဖြစ်သွားပါပြီ။ ရောင့်ရဲခြင်းဆိုတာ အကျိုးစီးပွားကို သမာလောဘ နဲ့ ကြိုးစားရှာဖွေရပါမယ်။တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းတွေကိုလဲစဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာဆည်းပူးနေရပါမယ်။ကလျာဏမိတ်တ ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေအဖော်မွန်ကောင်းတွေလဲရှာရမယ် ။ရှာဖွေစုဆောင်းမိလို. ရလာတဲ့ ဥစ္စာ ပစ္စည်းများကိုမှ သာသနာ့အကျိုး အများအကျိုး လူဘောင်လောက အကျိုးကို မျှဝေပီး တကိုယ်ထဲ မသုံးတာကမှ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း အစစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဘာသာမို.လို.ဆင်းရဲတယ် ဆိုတာ ဘုရားစကားကို ဖီလာတိုက်နေတဲ့သူများသာ ဖြစ်ပါတယ် ။ကျွန်တော်တို.ဗုဒ္ဒဘုရားရဲ့ စကားကိုသာအမှန်တကယ် လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်မယ်ဆိုပါလျှင် လူ.ဘောင်လောကကြီး တိုးတက်သာယာပီး ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင် နိုင်ပါမည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။အစဉ်လေးစားလျှက်........................(မှတ်ချက်- ဆရာတော်အရှင်ဇ၀န၏ တရားတော် တခုမှ ကိုးကားသည်)
read more "ရွှေမြန်မာ များ နှင့်ေ၇ာင့်၇ဲတင်းတိမ်ခြင်း"
Posted by မင်းစစ်သွေး at 5:25 AM No comments:
သတင်း Website များ